CM Browser ကို - Fast & လုံခြုံ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » CM Browser ကို - Fast & လုံလုံခြုံခြုံ
CM Browser ကို - Fast & APK ကို Secure
☆ ဒေါင်းလုပ်: အလွယ်တကူပေါများက်ဘ်ဆိုက်များကနေအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ download လုပ်ပါ။
☆ ကြော်ငြာ blocker: Block ကိုနှောင့်အယှက်တဲ့ pop-ups နှင့်ကြော်ငြာတွေ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်သန့်ရှင်းသော browsing အတွက်ပျော်မွေ့
☆ လုံခွုံရေး: အားလုံးဘက်စုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, (AV စနစ်-TEST အားဖြင့် rated) #1 antivirus ကိုအင်ဂျင်ကို
CM (သန့်ရှင်းမာစတာ) Browser ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုများထံမှသင်တို့ကာကွယ်ရန်နှင့်နေဆဲသင်သည်လျင်မြန်စွာ browsing အတွက်မြန်နှုန်းပေးနိုငျသောပေါ့ပါးသောမိုဘိုင်းဘရောက်ဇာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ဗီဒီယိုကိုထောက်လှမ်း function ကို၏အကူအညီနှင့်အတူ, CM Browser ကိုအမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့စေသည်။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ feature ကိုအတူသင်ချင်အများဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဒီနေရာမှာ Adblock function ကိုနှောင့်အယှက်တဲ့ pop-ups, နဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာတွေ, နှင့်ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်သင်တစ်ဦးအဆင်ပြေ browsing အတွက်အတွေ့အကြုံကပေးနိုင်ပါသည်
CM Browser ကို၏စမတ်ထောက်လှမ်း function ကိုအလိုအလျှောက်သင်နီးပါးတိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ကနေအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကယ်ဖို့ခွင့်ပြု, ဝဘ်အားဖြင့်သင်တို့၏ browse စဉ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဗီဒီယိုများ detect နိုင်ပါတယ်။ လိပ်စာဘားမှာဒေါင်းလုပ်အိုင်ကွန်နှင့်အတူ CM Browser ကိုအသုံးပြုသူကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်မနိုငျကွောငျးအခြို့သောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများရှိပါတယ်ရှိမရှိ, အသုံးပြုသူအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ သင်ကအွန်လိုင်းဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်မှာစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ video download အဆိုပါစမတ် download, function ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အလွန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ (!!! Youtube ကိုမှာဒေါင်းလုပ်ကြောင့် google ရဲ့မူဝါဒကိုမထောက်ပံ့ပါ !!!)
အလားအလာလိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ browsing အခါသင်သတိပေးလိုက်သည်။ သူတို့ကို malware ကူးစက်စာမျက်နှာများကိုဦးတည်သွားစေခြင်းအလိုငှါသင့် site အတွင်းရှိလင့်များကို click မတိုင်မီ CM browser ကိုအသုံးပြုသူများကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ လုံခြုံရေး browser ကိုအဖြစ်အမှန်တကယ်ကာလ၌မသင်္ကာ phishing ၏ CM ရဲ့စာရင်းကိုဆန့်ကျင်စာမကျြနှာစာရင်း, malware များနှင့်မလိုချင်သော software ကိုစာမကျြနှာစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
လုံခြုံသင့်ရဲ့ device ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, တစ်ဦးနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူ malware များအဘို့ apk ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်စိစစ်သည်။ ဒေါင်းလုဒ် finish ကိုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဆိုပါ browser ကိုသင်တို့အဘို့လုံခြုံရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူအားလုံးဘက်စုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့အဆင်ပြေ browsing အတွက်အတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
★ Incognito Mode ကို
မည်သည့်သမိုင်း, cookies များကို, cache နဲ့စသည်တို့ကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲ browsing, ရုပ်ဖျက်မုဒ်သင့်အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံအားဿုံပုဂ္ဂလိကနှင့်လျှို့ဝှက်စေသည်။
သင် app ကိုပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးသမိုင်းအချက်အလက်များ, ကိုအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ အချို့ privacy ကိုအထိခိုက်မခံတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသွားပေမယ့်အခြားမည်သူမဆိုသိရန်မလိုချင်ကြဘူးစေချင်သလား? CM Browser ကိုထွက်ပေါက်ကြားကနေ privacy ကိုဒေတာများကာကွယ်နည်းရန်သင့်သဲလွန်စရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။
★ Browsing Speed ​​ကိုအရှိန်
navigation ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်သင်၏ surfing လွယ်ကူစေပါသည်။ သင့်ရဲ့တစ်စိတ်ကြိုက် url ကိုတစ်ဦးအကြံပြုစာရင်းကနေတဆင့်သို့မဟုတ် input ကိုအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များထည့်နိုင်သည်။
★ 's Page Translator
အဆိုပါစာမျက်နှာကို Translator function ကို google ဘာသာပြန်ချက်အားဖြင့် powered သော 40 ဘာသာစကားများထက်ပိုပေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသွားရောက်လည်ပတ်စဉ်ဒီ function ကသင်၏ browsing အတွက်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူစေမည်
★ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် bookmarks ကို
Multi-tab ကိုထိန်းချုပ်ဘို့★ကတ် tabs များ
★ရှာရန်အင်ဂျင် switch ကို
** အတူတူသင့်ရဲ့အိပ်မက်ကို browser တည်ဆောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို Join! အပေါ် beta အသိုင်းအဝိုင်း Google+ မှာ: http://bit.ly/1mJKaXh ယခု join!
TOS သီးသန့်လုံခြုံရေး: cmcm.com/protocol/site/tos.html
★ပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှာပူစကားလုံးများကို Display ကိုပြဿနာ Fixed
★ Fixed အများအပြား mini ကို bug တွေ
★ Fixed အနည်းငယ်မှတ်ဥာဏ်ယိုစိမ့်ကိစ္စများ
★ Fixed အများအပြား crashing ကိစ္စများ
CM Browser ကို - ကြော်ငြာ blocker, Fast Download လုပ်, ကိုယ်ရေး
5.66 ကို MB
cheetah မိုဘိုင်း (AppLock & Anti-Virus)
အာမ mekonnen says:
ဇွန်လ 10, 2017 မှာ 9: 56 ညနေ
အရမ်း confortable apk အစာရှောင်ခြင်းအစာရှောင်ခြင်း ............ .. !!! ငါဒါပျော်ရွှင် tankyou ဖြစ်၏။
မေလ 17, 2016 မှာ 4: 54 ညနေ
မေလ 17, 2016 မှာ 4: 53 ညနေ
ဧပြီလ 26, 2016 မှာ 3: 01 ညနေ
ဒီ browser ကို bro များအတွက်စူပါအစာရှောင်ခြင်း browser ကို bro..thanx
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2016 မှာ 11: 54 နံနက်
verrrrryy အများကြီး Thank you!
နိုဝင်ဘာလ 17, 2015 မှာ 3: 35 နံနက်
အဘယ်ကြောင့်ဒီ app (CM) Pop-up ကြိုတင်မိတ်ဆက်ဖို့ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုထားခဲ့သလဲ ငါကြောင့် junk ၏ထို့အပြင် (58MB အက်ပ်) မှ CM လုံခြုံရေးစွန့်ပစ်။ ငါအရမ်းဒီ app ကိုအရေးပေါ်သိမ်းထားပါလိမ့်မယ်။
သြဂုတ်လ 7, 2015 မှာ 7: 46 နံနက်
မေလ 11, 2015 မှာ 10: 09 နံနက်
ဒါဟာအမှန်တကယ်လျှောက်လွှာများကိုဂိမ်းစစ်မှန်သော app ကိုပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကဒီနေ့ခေတ်ဤဆိုဒ်အားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထို့ကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုကျနော်တို့အလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင်းကိုသင်၏ website ကိုလျှောက်လွှာများကို ကျေးဇူးပြု. တောင်းဆိုရန်ဘယ်မှာလျှောက်လွှာ၏ 90% အလွန်ကောင်းသောက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ် android တွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် လည်းပိုပြီး features တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှာဖွေသည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2014 မှာ 5: 15 ညနေ
စူပါ Browser ကို
Cyrus babu says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2014 မှာ 10: 19 နံနက်
မြန်နှုန်းမြင့် browser ကို
ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2014 မှာ 1: 09 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2014 မှာ 1: 20 နံနက်
ဇန်နဝါရီလ 1, 2016 မှာ 5: 47 နံနက်
ဇူလိုင်လ 1, 2017 မှာ 4: 53 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 27, 2014 မှာ 12: 06 နံနက်